Golaha Wasiirada oo la badinaayo lana gaarsiin doono ilaa 18 xubnood isbuucyada soo socda – idalenews.com
Ilo wareedyo ku dhow Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Somalia ayaa u xaqiijiyay Warsidaha Idale News Online in maalmaha soo socda la kordhin doono golaha Wasiirada DF, kuwaasoo tiradooda laga dhigi doono 18-Wasaaradood, sidoo kalena isbedel lagu sameyn doono Wasiirada hada shaqeynaya.
Arintan ayaa ku timid kadib markii muran badan uu ka dhashay habka saami qaybsiga hay’adaha xukuumada Somalia, iyadoo laga yaabo in wasiiro hada ka tirsan xukuumada ay xilalkooda waayaan kuwo cusubna lagu soo daro.
Warka ayaa wuxuu sheegayaa in Todobaadkan ama kan xiga ay dhici doonto isku shaandheynta iyo kordhinta tirada Wasiirada Somalia, waxaana tani ay ka dhigaysaa in xukuumada cusub ay ku shaqeyn wayday habkii ay marki hore ugu talogashay inay ku shaqeyso.
“Howsha lagu kordhinayo waa mid socota, waxaana ay dhici doontaa dhowr casho kadib, keliya waxaa la sugayaa in Madaxweynuhu uu kasoo laaabto safarka uu ku maqan yahay” ayuu yri mas’uul ka tirsan xafiiska Saacid oo codsaday inaan magaciisa la sheegin.
Wasaarada Xukuumada ayaa qaarkood waxay yihiin kuwo la isku geeyay oo uu wasiir ka yahay hal ruux, taasoo keentay in culeys badan uu kala kulmo sidii uu howsha wasaaradahaas u qaban lahaa.
Tusaale ahaan Wasaarada Adeega Bulshada ayaa waxay ka kooban tahay dhowr wasaaradood oo kala ah: Wasaaradii Caafimaadka, Waxbarashada, Haweenka iyo Arimaha Qoyska iyo dhalinyarada & Sportiga iyo kuwo kale.
“Isku-shaandheynta iyo kordhinta tirada wasaaradaha waxay ahayd inay mar hore dhacdo, balse waxaa hakad geliyay mooshinkii Xukuumada laga keenay Baarlamaanka, kaasoo markii dambe dib looga laabtay” ayuu yiri mas’uulka la hadlay Warsidaha Idale News Online.
Dhanka kale waxaa jira kulamo ay Madaxweyne Xasan Shiikh iyo Ra’iisul Wasaare Saacid Faarax ay la yeesheen xubno ka tirsan Baarlamaanka oo ka mid ahaa kuwii Mooshinka keenay, kuwaasoo la sheegayo inay balanqaadyo u sameeyeen.
Lama oga sida uu baarlamaanka iyo Shacabka Soomaaaliyeed ay ku ogolaan doonaan Wasiiro la mid ah kuwii dowladihii KMG ay sameeyeen, waxana tirada kooban ee golaha wasiirada wax ka badashay habkii wax ku qaybsiga 4.5.
Hoobiyaal lagu weerarey Airport Kismaayo xalay iyadoo wafdiga wasiirka gaashaandhiga ay habeenkii 2aad ku hoydeen hakaas